Lahatsary: ​​Ny fiverenan’ny lamba nentim-paharazana any Mali · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2018 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, Italiano, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, македонски, polski, English
(Marihina fa tamin'ny 19 Martsa 2010 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ahafahana mahita ny lanjan'ny kolontsaina sy ny toekarena any Mali ny asa tanana vita amin'ny lamba nentim-paharazana izay ataon'olon-tsotra na fikambanana. Hita amin'ny fikambanan'ireo vehivavy, izay nilaza fa nametraka an'i Mali ho herin'ny indostrian'ny lamba izany ka hatrany amin'ireo mpanakanto izay mampiasa ny lamba nolokoina tamin'ny zavamaniry sy ny fotaka ho fanamafisana ny sanganasany, ka hatrany amin'ny fizahan-tany manokana izay niroborobo manodidina ity asa tanana ity.
Hanombohana izany, dia mampahafantatra antsika momba ny fangatahana fanampiana ara-bola nokarakarain'i Maureen Gosling i Craft mba ahafahany mamita ny lahatsary fanadihadiana izay nataony momba ny fandokoan-damba tao an-drenivohitra Bamako. Ato anatin'ity sombin-dahatsary ity, miresaka momba ny maha-zava-dehibe ny lamba voaloko amin'ny fomba ara-javakanto sy nentim-paharazana ao Mali ireo mpandoko lamba, sy ny fomba nanovan'izany ny fiainan'izy ireo [amin'ny teny bambara]:
Ny fampiasana fotaka ho lokon-damba ny iray amin'ireo teknika fandokoana nentim-paharazana ireo. Nalefa tao Segou ary mampiseho ity teknika ity ny lahatsary etsy ambany, tao amin'ny bilaogy TravelWestAfrica:
Antsoina ihany koa hoe bogolanfini ny lamba voaloko amin'ny ranon-javamaniry sy ny fotaka; ato anatin'ity horonantsary manaraka ity izay nalain'i hubuf ity ary novokarina tamin'ny taona 2006 dia manazava ny atao hoe bogolan amin'ny mpianatra asa maromaro ny mpanao asatanana iray, ny teknika fanaovana azy ary ny toeran'izany eo amin'ny fomban-drazan'i Mali:
Mampiseho ny vondron'olona mpitsidika izay mianatra ny teknika fanaovana ny bogolan ao Ségou amin'ny alàlan'ny sombin-damba samihafa ny lahatsarin'i claudiodumali .
Raha mahaliana anao ny zavakanto bogolan dia atolotr'i polbenmali ny lahatsary fanadihadiana an-tserasera iray manana fizarana roa ( Fizarana 1 , Fizarana 2 [amin'ny teny frantsay]) ahitana an'i Issiaka Dembele, mpanakanto iray mampiasa ny bogolan ho lasitry ny asa famoronany. Ao amin'ireo lahatsary ireo izay hazavain'ilay mpanakanto amin'ny teny frantsay no ahitana ny pitsopitsony sy ny dingana amin'ny antsipiriany hanaovana izany: mandoko ny lamba ho mavo , ny famonosana izany amin'ny alàlan'ny fotaka nalaina tao anaty honahona, izay efa notahirizina nandritra ny volana maro mba handokoana ny lamba ho mainty alohan'ny handokoana ny faritra mavo mba hanalana ny loko amin'ny toerana sasany, na hanindriana ny loko ho an'ny hafa.